Fisotroana zava-pisotro (zava-pisotro proteinina, dite, kafe) orinasa mpamokatra sy mpamatsy
Zava-pisotro (zava-pisotro proteinina, dite, kafe)
Ny retort sterilization rotary rotary rano dia mampiasa ny fihodinan'ny vatana mihodina mba hampandeha ny atiny ao anaty fonosana. Mafana sy mangatsiatsiaka amin'ny alàlan'ny mpanova hafanana, ka tsy handoto ny vokatra ny etona sy ny rano mangatsiaka ary tsy mila akora simika fitsaboana rano. Ny rano mandeha dia apetaka amin'ny vokatra amin'ny alàlan'ny paompin-drano sy ny vazaha nozaraina tao amin'ny retort mba hahatratrarana ny tanjon'ny sterilization. Ny mari-pana marina sy ny fanaraha-maso ny tsindry dia mety amin'ny vokatra fonosana isan-karazany.
Steam retort sy rotary dia ny fampiasana ny fihodinan'ny vatana mihodina mba hampandeha ny atiny ao anaty fonosana. Izy io dia voajanahary amin'ny dingan'ny fanesorana ny rivotra rehetra amin'ny valiny amin'ny alàlan'ny fanondrahana etona ny sambo ary mamela ny rivotra hitsoaka amin'ny valves vent. Tsy misy famoretana mandritra ny dingan'ny fanafoanana io dingana io, satria tsy mahazo miditra ny rivotra sambo amin'ny fotoana rehetra mandritra ny dingana fanamorana. Na izany aza, mety misy ny famerenam-bidy mandritra ny dingana mangatsiaka hisorohana ny fahasimban'ny kaontenera.